Arlette Ramaroson Mangataka ny hanafahana madiodio ireo mpanao gazety 3 mianadahy
Mangataka ny hanafahan’ny fitsarana madiodio ireo mpanao gazety telo mianadahy voarohirohy tamin’ilay raharaha angidimby tetsy Mahamasina ny herinandro lasa teo i Arlette Ramaroson, mpitsara iraisam-pirenena sady Reny.
Na misy porofo aza mantsy ny zavatra tahaka ireny dia jerena ihany koa na mitombona na tsia ny fitoriana ilay mpanao gazety. Tsy izy ireny no hanana saina ratsy hamoaka vaovao tsy marina fa ny asany no nataony ary raha sanatria ka misy diso dia mbola azo hahitsy amin’ny alalan’ny fanaovana “dementi”. Miantso ny mpitsara mba hanao ny asa ity mpitsara iraisam-pirenena ity sady miantso ny mpanao gazety handeha amin’ny fahamarinana ihany koa tsy miandany amin’ny atsy na ny aroa. Tsiahivina moa fa ny 16 septambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha angidimby ity. Mikasika ny fifidianana Ben’ny tanana izay hotanterahina ny 27 novambra ho avy izao indray dia nomarihiny fa ny lisi-pifidianana efa teo ihany no mbola hampiasain’ireo tompon’andraikitra ka tsy hatokisany. Ho an’ny antoko natsangany manokana moa dia tsy handatsaka kandida izy ireo. Ho an’ny rodoben’ny mpanohitra kosa anefa dia manana kandida manerana an’i Madagasikara izy ireo.
Legende : Mpitsara iraisam-pirenena i Arlette Ramaroson sady sekretera jeneralin’ny rodoben’ny mpanohitra